Fifidianana depiote: ho fahamarinan-toerana politika ny fifandanjan-kery vaovao | NewsMada
Fifidianana depiote: ho fahamarinan-toerana politika ny fifandanjan-kery vaovao
Ireo nanohana ny filohan’ny Repoblika tamin’ny fifidianana no mandrafitra ny governemanta amin’izao. Eo koa ireo niara-nandrafitra taminy ny IEM. Lojika politika izay. Hanao ahoana izany amin’izay mety ho fifandanjan-kery vaovao avy amin’izao fifidianana solombavambahoaka izao?
Mbola lojika politika ihany koa, raha arakaraka ny fifandanjan-kery eny anivon’ny Antenimierampirenena vaovao hijoro eo ny ho firafitry ny governemanta, araka ny fijerin’ny mpandinika sasany azy. Izay raha tiana ny hisian’ny fahamarinan-toerana politika maharitra ho amin’ny fampandrosoana.
Eo aloha ny fanoloran’izay solombavambahoaka manana ny maro anisa amin’ny fifidianana izay hotendrena ho praiminisitra, araka ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana. Amin’izany, tsy hisy ny fivadibadihana vondrona politika, araka ny And. 72 amin’ny lalàmpanorenana hahazoana ny maro anisa.
Mety tsy hiova firy ny firafitry ny governemanta
Raha araka izay fifandanjan-kery politika izay àry ny ho fanolorana praiminisitra sy ny ho firafitry ny governemanta, mety tsy hiova firy ny ho firafitry ny governemanta? Na eo amin’ny mpikambana izany, na ny isany. Araka ny politikam-pitsitsiana nosoritan’ny filohan’ny Repoblika rahateo izay.
Efa nanao fanamby amin’ny governemanta rahateo ny filohan’ny Repoblika, nanome enim-bolana hanaovana tombana ary herintaona hahazoana mitsara azy. Aorian’izay ny mety hisian’ny fanamboarana na fanovana governemanta? Na tsy mbola amin’izay ho fijoroan’ny Antenimierampirenena vaovao eo avy hatrany izany fanovana izany.
Tsy vitan’izay, mbola handany fotoana indray ny fanovan-drafitra sy ny fanoloana olona. Nefa maika avokoa ny zava-drehetra, ary efa miandrandra fanovana sy fihatsaram-piainana ho amin’ny tsaratsara kokoa ny vahoaka: mila asa haingana sy mivaingana. Mila avela miasa aloha izany ny governemanta amin’izao…
Hitondra ho amin’ny fahamarinan-toerana politika eo amin’ny fitondrana ankapobeny izay àry ve izay mety ho fifandanjan-kery eny anivon’ny Antenimierampirenena vaovao hijoro eo? Izay no andrandrain’ny maro amin’izao, raha mbola mitoetra ny fahazoan’ny fitondrana izay maro anisa izay. Na ahoana na ahoana, miankina amin’ny mpifidy tompon’ny teny farany io.